Momba anay - Zhangjiagang Hongshida Textile Trading Co., Ltd.
Zhangjiagang Hongshida Textile Trading Co., Ltd. dia manao fikarohana ara-teknolojia sy fampandrosoana, famokarana ary koa fanafarana sy fanondranana fitaovana vaovao, miaraka amin'ny vokatra toy ny tabilao manintona feo, tabilao miaro amin'ny lelafo, nylon, polyester ary lamba hafa. Fitaovana. Any amin'ny 21 Xinzha Middle Rd., Tanànan'i Yangshe, Zhangjiagang, Suzhou, ny velaran-taninay dia mihoatra ny 20.000 m2. Hatramin'ny nananganana azy dia natokana ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fitaovana vita amin'ny fibre efa ho 20 taona izao. Manana orinasam-bola roa ny orinasanay. Ny iray dia Zhangjiagang Xinlun Textile Co., Ltd., izay manampahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fibre nylon, polyester ary polypropylene. Ny iray hafa dia Suzhou Lishengyuan fitaovana vaovao Technology Co., Ltd., izay manome ny mpanjifa vahaolana matihanina amin'ny akustika ary mandray anjara amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana fitaovana polyester fiber-manintona feo. Natokana amin'ny fikatsahantsika fikirizana ho an'ny kalitao miavaka, nampitaina ho fitaovana famokarana mandeha ho azy iraisam-pirenena isika tamin'ny taona 2002, miaraka amin'ny tanjon'ny vokatra famokarana izay hahafa-po ny mpanjifantsika.
Xinlun Textile dia nanomboka namokatra fibre staple nylon tamin'ny 2002. Tsy vitan'ny hoe manana traikefa manan-karena amin'ny famokarana izy io, fa manana fitaovana fitiliana feno sy mitarika foto-kevitra R&D koa. Amin'izao fotoana izao dia manana fanangonana vokatra fito vita amin'ny kofehy nylon sy kofehy zana-collecitons izy, ao anatin'izany ny kofehy mahazatra, kofehy mahery vaika, kofehin-profil, kofehy fandokoana avy amin'ny vahaolana manta, kofehy maharitra sy taolana miasa. Ireo vokatra ireo dia be mpampiasa amin'ny fampifangaroana mihodina amin'ny landihazo, polyester volon'ondry rayonand. Ankoatr'izay, izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny lamba tsy tenona, akora fanosotra, lamba firakotra taratasy ary saha hafa. Ny famaritana lehibe dia manomboka amin'ny 0.8d ka hatramin'ny 30d, miaraka amin'ny halavany 38mm ka hatramin'ny 130mm. Ny orinasa dia manolo-tena hanome izay ilain'ny mpanjifanay tsirairay avy ary hamorona soatoavina fanampiny ho azy ireo. Miorina amin'ny valinteny haingana sy famokarana miovaova, ny orinasa dia manokana ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny kofehin-drongony. Mandritra izany fotoana izany dia mivelatra amin'ny tsena avo lenta sy eto an-toerana koa izy amin'ny alàlan'ny fanizingizinana ny fanavaozana tsy miankina, efa nanomboka ny diantsika tsy tapaka ny fanatsarana ny fifaninanana ifotony.
Ny vokatra avy amin'ny Deco Sound dia mahasintona feo sy haingo ary milamina ara-tontolo iainana. Mandritra izany fotoana izany, izy ireo koa dia manana fitaovana toa ny fijanonan'ny lelafo, ny insulated thermaly ary malefaka be. Midika izany fa ireo vokatra ireo dia afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fitsaboana akustika sy ny fomba fanaingoana isan-karazany. Noho izany, izy ireo dia be mpampiasa amin'ny toerana toy ny sinema, efitrano fandraisam-bahiny, studio, hotely, efitrano fandraisam-bahiny, toeram-pivarotana, sekoly, gymnasium, tranoheva karaoke, sns. Noho ireo tombony azo ireo, ny lishengyuan desosound desosound marika manana feo mandray feo dia malaza ao an-trano sy any ivelany.
Ourcompany dia manana patanty teknika ao an-trano, ary ekipa mpitantana tena tsara. Izahay dia manaja fatratra ny rafitra isan-karazany sy ny rafitra fiarovana ny tontolo iainana .. Tsy mijanona amin'ny fikatsahana azy ho lasa matihanina sy manara-penitra izahay. Mandritra ny fizotry ny fitomboana mitohy, dia raisinay ho fiarovana ny tontolo iainana hatrany, ny fiarovana ny angovo ary ny fihenan'ny famoahana entana. Ny tanjonay dia ny ho tonga marika matanjaka amin'ny kofehy mahasoa ny tontolo iainana ary hanompo tsara kokoa ny tsena manerantany.